Allergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Allergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Allergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း)
Allergic rhinitis ဆိုတာဘာလဲ။
နှာခေါင်းအတွင်းသား အမြှေးပါးလေးတွေ aရာင်ရမ်းတာကို rhinitis လို့ခေါ်ပါတယ်။ မိမိနဲ့ဓါတ်မတည့်တဲ့ပစ္စည်းတခုခုကိုရှုရှိုက်မိလို့ ဖြစ်လာတဲ့ နှာခေါင်းအတွင်းသားရောင်ရမ်းမှုကို Allergic rhinitis လို့ခေါ်ပါတယ်။
allergens လို့ခေါ်တဲ့ မိမိနဲ့ဓါတ်မတည့်တဲ့ပစ္စည်းတခုခုကိုခန္ဓါကိုယ်ကအလွန်အကျွံတုံ့ပြန်တဲ့အတွက် ဒီအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ။
Allergic rhinitis အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အချိန်တခုခုမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ seasonal allergic rhinitis နဲ့တစ်နှစ်လုံးတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ perennial allergic rhinitis တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Allergic rhinitis ဟာဘယ်လောက်ထိအဖြစ်များသလဲ။
ဒီရောဂါဟာ အနည်းငယ်အဖြစ်များပြီး အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ aလ့လာချက်မှတ်တမ်းတွေအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကနေ သုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ ဒီဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ထဲက အများစုဟာ ပန်းဝတ်မှုန်တွေနဲ့ဓါတ်မတည့်တာပါတဲ့။
Allergic rhinitis ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
Allergic rhinitis ရဲ့အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ –
• ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြင်းထန်လာရင်။
• ဘာဆေးသုံးသုံးမသက်သာရင် ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြသင့်ပါတယ်။
ဘာတွေကAllergic rhinitis ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
allergen လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်မတည့်စေတဲ့ ပစ္စည်းတမျိုးမျိုးကို ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ histamine လို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းတမျိုးကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်(histamine ဆိုတာ အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ ပြင်ပအရာဝတ္တုတွေရဲ့ ရန်ကနေခန္ဓါကိုယ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတခုပါ)။ ဒီhistamineကြောင့်ပဲ လက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာကာ allergic rhinitis ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။
လူအများစုနဲ့ဓါတ်မတည့်တာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ allergens တွေကတော့
• ရေမွှေးနံ့စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Allergic rhinitis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေပါသလဲ။
Allergic rhinitis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်-
ယခုဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက်များနေရာတွင်အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Allergic rhinitis ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အချိန်တစ်ခုခုမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ seasonal allergic rhinitis လား ဒါမှမဟုတ် တစ်နှစ်လုံးတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ perennial allergic rhinitis လားဆိုတာကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ မေးခွန်းတွေမေးပြီးတဲ့အခါ ဓါတ်မတည့်တဲ့ အခြေအနေကို သိရှိနိုင်စေဖို့ သင့်အရေပြားအပေါ်ယံလွှာကို ဓါတ်မတည့်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ပစ္စည်းအချို့ ထိုးသွင်းပြီး အရေပြားစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အရေပြားမှာ အနီရောင်ဖုလေးတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ allergic rhinitis ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကို သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့အရေပြားကိုစစ်ဆေးဖို့အခြေအနေမပေးဖူးဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့radioallergosorbent test (RAST) လို့ခေါ်တဲ့သွေးစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်မတည့်စေတဲ့ပစ္စည်း allergens တွေကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သွေးထဲမှာထွက်ရှိလာတဲ့ ပဋိဇီဝပစ္စည်းimmunoglobin E antibodies တွေရဲ့ ပမာဏကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့် ဓါတ်မတည့်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့အနေအထားကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။
Allergic rhinitis ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
allergic rhinitis ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် အောက်ပါကုသမှုနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
• Antihistamines။ ဒီရောဂါအတွက် အသုံးအများဆုံးဆေးဖြစ်ပြီး histamines တွေထွက်ရှိမလာအောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ သောက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် နှာခေါင်းဖြန်းဆေးအနေနဲ့သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ တချို့histamines အမျိုးအစားတွေက အိပ်ငိုက်စေတတ်တာကို သိထားရပါမယ်။
• Decongestants။ နှာခေါင်းပိတ်တာကို သက်သာစေတဲ့ဆေးတွေပဲ ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုသုံးရက်ထက်ပိုပြီး မသုံးစွဲရပါဘူး။
• စတီးရွိုက် နှာခေါင်းဖြန်းဆေး။ သူတို့ဟာလည်း allergic rhinitis ကိုထိရောက်စွာကုသနိုင်တဲ့ဆေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားကုထုံး။ တကယ်လို့သင့်အခြေအနေက အနည်းငယ်ဆိုးရွားတယ်ဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်က ဒီကုထုံးကို အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီကုသမှုနည်းလမ်းမှာဆိုရင် ဓါတ်မတည့်စေတဲ့ပစ္စည်း (allergens) တွေကို သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေ သက်သာလာတဲ့အထိ ပုံမှန်နည်းနည်းစီထိုးသွင်းသွားပြီး ဓါတ်မတည့်မှုကို လျော့နည်းလာအောင် ကိုယ်ခံအားမွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှာအောက်ဆေးငုံခြင်း (Sublingual immunotherapy (SLIT)။ ဒါဟာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းနဲ့သဘောသဘာဝချင်းတူပေမယ့် လျှာအောက်ငုံရထားရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ပါးစပ်ထဲမှာ ယားယံတာ ဒါမှမဟုတ် နားရွက်နဲ့လည်ချောင်းယားယံတာမျိုး၊ နီရဲရောင်ရမ်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Allergic Rhinitis http://www.healthline.com/health/allergic-rhinitis#Overview1.Accessed July 20, 2016.
Allergic rhinitis https://medlineplus.gov/ency/article/000813.htmPHPSESSID=c44671012097202d65a4da2388664ed7. Accessed July 20, 2016.